Anosizato : Mpanafatra fiara vahiny nahatrarana “cocaïne” -
AccueilSongandinaAnosizato : Mpanafatra fiara vahiny nahatrarana “cocaïne”
“Cocaïne” milanja 1 kilao sy 300 grama be izao no saron’ny mpitandro filaminana teny amin’ny “rond point” eny Anosizato, tao anaty fiarana teratany vahiny iray voalaza fa mpanafatra fiara , omaly maraina.
Nokasaina amidy eto an-drenivohitra indray. Aharenesam-baovao hatrany ny fahatratrana teratany vahiny mitondra zava-mahadomelina mahery vaika tahaka itony eto amintsika. Ity izany no haza goavana sarona tamin’ity fiatombohan’ny taona ity, raha toa ka somary nangina izy taorian’ny nahatrarana ireo teratany beninoa teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, izay nahatrarana 23 kilao be izao ny volana oktobra teo. Lehilahy teratany frantsay iray ity tratran’ny vela-pandrika ity, ny marainan’ny alakamisy lasa teo. Talohan’ny nahasamborana azy moa dia, angom-baovao no nahalalana ny fisiana zava-mahadomelina any aminy . Nanao ny fanaraha-maso avy hatrany ny mpitandro filaminana vao naharay ny fampandrenesana, ka noraisim-potsiny ity farany, rehefa nandalo teny amin’ny “rond point” Anosizato. Nosavaina ny fiara nentiny, ka tamin’ny alalan’izany no nahasarona ireo bolongana “cocaïne” na zava-mahadomelina mahery vaika milanja 1kilao sy 300 grama. Vola be tokoa no horaofina raha tsy tratra izao hazany izao, satria raha ny fantatra dia tsy latsaky ny 7 Alina Ariary hatramin’ny 1 Hetsy eo no ivarotana azy itony. Hatreto efa mandeha ny fanadihadiana, ary efa eo am-pelatanan’ny polisy ny raharaha.
Mateti-pitranga ity resaka fahatrarana zava-mahadomelina ity eto amintsika. Ity no nanomboka azy raha ny tamin’ity taona ity. Santionan’izany fotsiny izao ireo kazarana teratany vahiny efa rava teto amintsika tamin’iny taona 2018 iny. Isan’izany ny Afrikanina, Gineanina, Maorisianina, tonizianina ary misy miray tendro amin’ny Malagasy izy ireo, izay efa eny Antanimora avokoa. Ny nahazendana hatramin’izao, toa tsy misy tohiny mihitsy ny mahakasika azy ireny, satria raha ny zavatra tsikaritra dia tsy maharitra ela akory no hitazonana ireo mpanao ity trafika ity eny am-ponja, izay ireo efa mpamerin-keloka avokoa no matetika tratra. Aiza ho aiza ny fetran’ny fanasaziana tokony hihatra amin’ny teratany vahiny amin’ity trafikana rongony mahery vaika ity eto amintsika?
tsy mbola nikatona ny fery, izay no tsapa sy tazana tamin’ ny sora-baventy nolanjain’ ny fikambanan’ireo niaram-boina (AV7) nandritra ny hetsika fahatsiarovana sy fanateram-boninkazo ho an ‘ireo lavo tamin’ ny hetsika 7 febroary 2009 tetsy ...Tohiny